Indlela Ngemvume Ukuze 192.168.1.254?: A Isinyathelo ngu Isinyathelo Guide On Indlela Setha kabusha Iphasiwedi Futhi Ukucushwa Of router
Kulesi igxathu negxathu Umhlahlandlela Indlela Ngena ngemvume ku-yokuPhatha ka 192.168.1.254, sizoba sibheke isinyathelo ngasinye kanye nemihlahlandlela.
Kuyini Ikheli le-IP 192.168.1.254?
192.168.1.254 ikheli le-IP esetshenziswa imizila imifanekiso embalwa ukuze ukhombe ngokwabo kunethiwekhi. 192.168.1.254 ingenye amakheli “inethiwekhi eyimfihlo-16-bit isikhala ikheli block” okuyinto ingasetshenziswa kuphela ngaphakathi amanethiwekhi yangasese.
Lokhu isikhala kheli le-IP siqukethe 65,536 amakheli eyabonakala ngokwanele amanethiwekhi encane ekhaya. ngokuvamile, ikhaya noma amanethiwekhi ibhizinisi elincane zisebenzisa nje isethi engezansi lokhu futhi imizila kakhulu sigodle uhla 192.168.1.0 – 192.168.1.255 inethiwekhi yabo.
192.168.1.254 kuyinto nekheli le-IP okuza etinhlotjeni letibanti yokumpontshelwa IANA(Internet Owabelwe Inombolo Authority) ngezinhloso ekhethekile. Uma ukuthenga imodemu noma router, kuziwa ngemininingwane mayelana nendlela ukungena ngemvume ku-router ukuthi kukusiza ukuba wenze izinguquko kuzilungiselelo router yakho. amakheli e-IP Private ukuqinisekisa ukuthi azikho izingxabano futhi akekho omunye umuntu bangangena kunethiwekhi yakho.
Amanethiwekhi ayimfihlo uthola zithandwa. Njengoba per izindaba zamuva, IANA( Internet Owabelwe Inombolo Authority) igodle eziningi ikheli amabhlogo ethize isizukulwane esilandelayo IPv6 amakheli. Ngenxa yezizathu zokuphepha, izinkampani eziningi zikhetha indlela amakheli yangasese. Ngo uhlobo enjalo amanethiwekhi, khona njalo unqande ukufinyelela ku-intanethi futhi ngokuvamile i-proxy kudingeka ukufinyelela kuwebhu.
192.168.1.254 Igama lomsebenzisi & Iphasiwedi
Njalo-router futhi imodemu has a ikheli ezenzakalelayo IP ngemvume ukuze ufinyelele izilungiselelo router. Ikheli le-IP 192.168.1.254 ingasetshenziswa ukufinyelela izilungiselelo imizila ehlukene efana TP-Link, ADSL imizila, 2wire, 3com imizila, njll.
Okudingeka Ukuze ufinyelele esangweni okuzenzakalelayo:
Uhlelo exhunywe kwi-Wi-Fi ekhaya
A uhlelo lapho ungakwazi ukufinyelela isiphequluli
【192.168.1.254】- Admin Ngemvume & Router Isethaphu Umhlahlandlela 2019
isinyathelo 1: Vula isipheqi ku-PC yakho bese ufaka ikheli ezenzakalelayo IP 192.168.1.254 kubha yokusesha kanye ikhasi lokungena ngemvume eyovulwa uma umzila wakho unohlu le ikheli othize IP.
isinyathelo 2: Faka igama lomsebenzisi nephasiwedi ukuze ungene ku-panel admin. Uma ungazi noma ukhohlwa igama lomsebenzisi nephasiwedi, umane kabusha kumzila wakho kuya izilungiselelo ezizenzakalelayo nge cindezela bese ubamba inkinobho reset cishe 10 ukuze 15 imizuzwana.
isinyathelo 3: Kunconywa ukushintsha SSID of router okuyinto igama lenethiwekhi kubonakala kwabanye ithebhu yakho yenethiwekhi.
Zama ukugcina imfushane & elula
Musa ukwenza kube uyinqaba kakhulu njengoba ngezinye izikhathi kungase nomkhwezeli
Ungasebenzisi noma iyiphi imininingwane yakho siqu njengoba igama router yakho.
Indlela Shintsha Igama lomsebenzisi Okuzenzakalelayo bese Iphasiwedi
Kubalulekile ukuthi lushintshe izilungiselelo ezizenzakalelayo ku-router yakho ngokufinyelela iphaneli yokuphatha usebenzisa Private Ikheli le-IP 192.168.1.254 ukuze kuqinisekiswe ukuthi uxhumo lwakho ivikeleke.
Landela lezi zinyathelo ngezansi ukuze ushintshe igama lomsebenzisi nephasiwedi ezenzakalelayo.
Okokuqala ukufinyelela esangweni okuzenzakalelayo ngokusebenzisa ikheli le-IP 192.168.1.254.
Bese ufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi futhi ubone ukulungiselelwa WiFi (izindlela ahlukile ezahlukene router / imodemu), Uma une-TV oqondile & WiFi bese usebenzisa inethiwekhi ekhaya bese ukhetha engenantambo router inketho. uhlobo Lapho icelwe Ikhodi Kudivayisi (atholakala ohlangothini esangweni). Ungashintsha igama GCINA
Ukushintsha iphasiwedi ezizenzakalelayo, udinga ukukhetha WPA / PSK izilungiselelo ukubethela lapho impunga iphasiwedi kuzobekwa obala. Manje Ukushintsha iphasiwedi bese ugcine.
Amathiphu ukushintsha igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi:
iphasiwedi yakho kufanele ibe kokubili amagama, yezinombolo nezinhlamvu
iphasiwedi yakho kufanele ibe 8-16 izinhlamvu ubude futhi kulula ukukhumbula
Igama lomsebenzisi kufanele kube elula
Kufanele uqaphele lomsebenzisi nephasiwedi ikheli le-IP 192.168.1.254 ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo uma kwenzeka ukhohlwe ngandlela-thile.
Kungani ngingakwazi ukuxhuma router yami: http://192.168.1.254
Abantu abaningi abakwazi ukuxhuma iphaneli ezenzakalelayo ngemvume ngenxa yephutha encane ukuthayipha. Kufanele siqiniseke ukuthi ayikho isemikholoni kodwa ikholoni ngemuva kwelibito http noma i-https. Ikheli elungile 192.168.1.254
Kuthiwani uma ngikhohliwe IP lomsebenzisi nephasiwedi?
Noma nini uthola router entsha noma imodemu, uthola izilungiselelo ezizenzakalelayo ukuthi basuke ngekhodi ebhokisini noma njengoba kushiwo imanuwali. Ungase futhi uthintane ne-ISP yakho (Umhlinzeki Wesevisi Ye-inthanethi) ukuze uthole izilungiselelo ezizenzakalelayo.
Izinyathelo Setha kabusha umzila – Indlela Setha kabusha router yakho
Vala router yakho.
Cindezela bese ubamba inkinobho reset cishe 10-15 imizuzwana usebenzisa into ezicijile ezifana inaliti bese uvule router.
Uyekele inkinobho ukuvumela sokuqalisa kabusha router
Manje ukuxhuma le router ngokusebenzisa ukuxhumana WiFi noma ikhebula inethiwekhi futhi ngemvume usebenzisa izilungiselelo ezizenzakalelayo.
Isexwayiso: Ukusetha kabusha umzila kuzosusa yonke owedlule imininingwane ukulondolozwa nezilungiselelo. Kuyobahambela router yakho ku zasembonini.
I 192.168.1.254 ikheli lasesizindeni se-intanethi nekheli le-IP okuyinto esetshenziswa imizila eminingi ukuzikhomba kunethiwekhi. Kufanele ugcine le ikheli le-IP engqondweni uma kwenzeka ufuna ukushintsha izilungiselelo router yakho ngoba kuzokuvumela ukufinyelela iphaneli yomqondisi.